Sawirro muujinaya weerarkii fashilmey ee Maraykanka ka fuliyay Soomaaliya oo la baahiyay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On May 6, 2017 319 1
Markii ugu horreysay waxaa la helay Sawirro muujinaya raadadka ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Daaru-Salaam ee gobolka Shabeellaha hoose, kaas oo dhexmaray ciidamo Maraykan ah iyo kuwa Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Sawirrada la baahiyay waxaa lagu arkayaa dhiig farabadan oo ku daatay barxadda la isku farasaaray, waxaa sidoo kale la arkayaa qeyb kamid ah jirka Askari Maraykan ah oo goobta looga cararay, iyo qalab kala duwan oo ay isticmaalayeen ciidamada Maraykanka sida Qalab Caafimaad iyo Biyo.
Waxyaabaha sidoo kale sawirrada la baahiyay lagu arkayo waxaa kamid ah Qalab milliteri oo ay ciidamada Maraykanka uga carareen deegaanka DaaruSalaam.
Dhanka kale Warbaahinta Maraykanka ayaa soo bandhigay sawirka Askarigii Maraykanka looga dilay Daaru-Salaam, kaas oo magaciisa lagu sheegay Kyle Milliken, waana 38 jir.
Sanadkii 2002 ayuu kusoo biiray ciidanka Maraykanka, waxaana uu kasoo dagaallamay dalalka Afqaanistaan iyo Ciraaq, isagoona dhowr jeer billad sharfeed ku helay dagaalka uu kula jiro Muslimiinta, waxaana Warbaahinta Maraykanka ay sheegayaan in Kyle uu ahaa taliyihii hogaaminayay weerarka fashilmay ee Maraykanka ay soo qaadeen.
Asc walaahi aad ayan ugu faraxnay jabka kufarta soo dushay iyo munafaqiinta cara tuurka Allah akbar allahu akbar allahu akbar ilahow muslimiinta guusha u ziyaadi aamiin aamiin aamiin .